AMAXESHA: Khulisa ikhaya lakho okanye iphepha lokufika ngezi zinto zisixhenxe zomxholo | Martech Zone
AMAXESHA: Khulisa ikhaya lakho okanye iphepha lokufika kunye nezi ziqwenga zi-7 zomxholo
NgoLwesine, uJuni 6, 2019 NgoMgqibelo, ngoJuni 8, 2019 Douglas Karr
Kule minyaka ilishumi idlulileyo, sizibonile iindwendwe kwiiwebhusayithi ziziphatha ngendlela eyahlukileyo. Kwiminyaka eyadlulayo, sakha iisayithi ezidwelise iimveliso, amanqaku kunye nolwazi lwenkampani… zonke ezo zinto bezijolise kwiinkampani wenza.
Ngoku, abathengi kunye namashishini ngokufanayo bafika kumakhasi asekhaya kunye namaphepha okufika ukuphanda ukuthengwa kwabo okulandelayo. Kodwa abafuni uluhlu lweempawu zakho okanye iinkonzo, bajonge ukuqinisekisa ukuba uyaqonda kubo kwaye uliqabane elifanelekileyo lokushishina nalo.
Kule minyaka ilishumi ngoku, bendinyanzela iinkampani ukuba zithengise izibonelelo ngaphezulu kweempawu zabo. Kodwa ngoku, ikhaya elilinganisiweyo okanye iphepha lokufika lifuna ngokwenene iziqwenga ezisixhenxe zomxholo ukuze zichume:
Ingxaki - Chaza ingxaki onayo amathemba akho kwaye usombulule abathengi (kodwa ungathethi ngenkampani yakho… okwangoku).
Bungqina -Nika amanani-nkxaso axhasayo okanye isicatshulwa senkokheli yeshishini esinika intuthuzelo ukuba ngumcimbi oqhelekileyo. Sebenzisa uphando oluphambili, uphando lwesibini, okanye iqela lesithathu elithembekileyo.
Resolution -Nika ulwazi ngabantu, iinkqubo, kunye namaqonga anceda ukunciphisa ingxaki. Kwakhona, ayisiyiyo apho ungena khona kwinkampani yakho… lithuba lokubonelela ngolwazi olusetyenziswa lushishino, okanye iindlela ozihambisayo ezaziwa ngokubanzi.
intshayelelo -Yazisa inkampani yakho, imveliso, okanye inkonzo. Le yingxelo nje emfutshane yokuvula umnyango.
isishwankathelo -Nika isishwankathelo sesisombululo sakho, uphinda-phinda indlela esilungisa ngayo ingxaki echaziweyo.
Yahlula - Cacisa ukuba kutheni abathengi benqwenela ukuthenga kuwe. Oku kunokuba sisisombululo sakho esitsha, amava akho, okanye impumelelo yenkampani yakho.
Ubungqina Bentlalo -Nika ubungqina, amabhaso, izatifikethi, okanye abathengi ababonelela ubungqina bokuba uyayenza le nto uthi uyayenza. Oku kunokuba bubungqina (kubandakanya ifoto okanye ilogo).
Masicacisele imizekelo eyahlukeneyo. Mhlawumbi uyiSalesforce kwaye ujolise kwiinkampani zeenkonzo zezezimali:
Iinkampani zeenkonzo zezezimali ziyasokola ukwakha ubudlelwane kwiminyaka yedijithali.
Ngapha koko, kwisifundo esivela kwi-PWC, i-46% yabathengi ayisebenzisi amasebe okanye amaziko okufowuna, ukusuka kwi-27% kwiminyaka emine edlulileyo.
Iinkampani zeenkonzo zezezimali kufuneka zixhomekeke kubuchule obunqabileyo, omni-channel zonxibelelwano ukubonelela ngexabiso kunye nokwenza ubudlelwane babenethemba kunye nabathengi.
I-Salesforce ngumboneleli ophambili weNtengiso yeStack kwishishini leenkonzo zezezimali.
Ngokudityaniswa okungahambelaniyo phakathi kweCRM yabo, kunye nohambo oluphambili olunokubakho kunye nobukrelekrele kwilifu lokuThengisa, iSalesforce inceda iinkampani zetekhnoloji yezemali ukubopha ukwahlula ngokwamanani.
I-Salesforce yamkelwe nguGartner, Forrester kunye nabanye abahlalutyi njengeyona ndawo iqhelekileyo nesetyenziswa kakhulu kolu shishino. Basebenza nemibutho yezemali emikhulu kunye neyona iphucukileyo njengeBhanki yaseMelika, njl.
Amaphepha angaphakathi, ewe, anokuya kwiinkcukacha ezinzulu. Unako (kwaye kuya kufuneka) wongeze lo mxholo ngemifanekiso, imizobo kunye nevidiyo. Kananjalo kuya kufuneka ubonelele ngendlela yokuba undwendwe ngalunye lambe nzulu.
Ukuba ubonelela ngezi ziqwenga zi-7 zomxholo kwiphepha ngalinye lesiza sakho esijolise ekuqhubeni undwendwe kwisenzo, uya kuphumelela ngokuqinisekileyo. Oku kuqhekeka kunceda abatyeleli ekuqondeni ukuba ungabanceda njani kwaye ungathenjwa. Ibahambisa ngokwenkqubo yabo yendalo yokwenza izigqibo.
Kwaye kubandakanya umxholo oyimfuneko ekwakheni ukuthembana kunye nokomeleza igunya lakho. Ukuthembana negunya kuhlala kungoyena mqobo uphambili ekuthatheni amanyathelo kukhenketho.
Ngoku ukuba uhambe ngengqiqo undwendwe lwakho ngale nkqubo, baxelele ukuba leliphi inyathelo elilandelayo. Inokongeza kwinqwelo ukuba iyimveliso, ishedyuli yedemo ukuba isoftware, khuphela umxholo owongezelelweyo, bukela ividiyo, uthethe nommeli ngengxoxo, okanye ifom yokucela ulwazi olongezelelweyo.
Iindlela ezimbalwa onokukhetha kuzo zinokuba luncedo, zivumela abo bakhenkethi banqwenela ukuphanda ukuze bembe nzulu okanye abo bakulungeleyo ukuthetha nentengiso ukuba bafikelele kuncedo.
tags: ukuguqulwa kokusebenzaindlela yokuguqulaukuguqulwa kwephepha lokufikaUkulungiswa kwephepha lokufika
Ngokufikelelekayo: Indawo yokuThengisa yeNdwendwe